घरलाई डेंगी लामखुट्टेबाट जोगाउने १० उपाय – Merokarnali
घरलाई डेंगी लामखुट्टेबाट जोगाउने १० उपाय
मेरो कर्णाली । २०७६, १९ भाद्र बिहीबार मा प्रकाशित
स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले केही दिनअघि भनेका थिए, ‘डेंगी नियन्त्रण गर्न मुश्किल भयो, सेना परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो।’
खासमा यो लामखुट्टे रोक्ने हैसियत सरकार वा सेनासँग होइन, हामी जनतासँगै छ। जनताले चाहेनन् भने सरकारले ‘संकटकाल’ लागू गरे पनि डेंगी लामखुट्टे रोकिँदैन।
‘डेंगी लामखुट्टेको जीवनचक्र चलाउन प्लास्टिकका टुटेफुटेका भाँडाकुँडा, पेयपदार्थका क्यानदेखि छतमा जमेको पानी नै काफी हुन्छ,’ डा. लाल भन्छन्, ‘सफा पानीमा हुर्किने आनीबानीकै कारण यो लामखुट्टे काठमाडौंमा फैलिएको हो।’
‘खानेपानी आपूर्तिको राम्रो व्यवस्था नभएकाले हामी पानी जम्मा नगर्नुस् भन्न सक्दैनौं,’ डा. लालले धरानको उदाहरण दिए, ‘डेंगी प्रकोपपछि त्यहाँको स्थानीय सरकारले हरेक दुई दिनमा जम्मा गरेको पानी फ्याँक्नू र सफाइमा ध्यान दिनू भन्यो। स्थानीयले सोधे– पानी जम्मा नगरे हामीले के खाने? केले लुगा धुने? कसरी नुहाउने?’
‘विश्वमा डेंगी लामखुट्टे नियन्त्रण भएका ठाउँको अनुभव हेर्ने हो भने कडा कानुनले काम गरेको देखिन्छ,’ उनले सिंगापुरको उदाहरण दिए।
झर्को नमान्ने हो भने यी उपाय खासै अप्ठ्यारा छैनन्। तर, यो काम एक्लो घरले गरेर हुँदैन। टोल–गाउँका सबैले गर्नुपर्छ। ‘भुटान, बंगलादेश, मलेसिया, श्रीलंकाजस्ता देश पनि यो समस्याले आजित छन्। लाखौं खर्चेर प्रयास गर्दा पनि डेंगी नियन्त्रण भएको छैन,’ लाल भन्छन्, ‘सरकारको पहलसँगै सर्वसाधारणको सहयोग नभए लामखुट्टे नियन्त्रण सम्भव हुन्न।’
उनका अनुसार डेंगी छिटो फैलिने रोग हो, तर प्राणघातक मानिँदैन। हामीकहाँ मृत्यु भएकामध्ये एक जनामा ‘स्क्रब टाइफस’ पनि थियो भने अर्कामा उच्च रक्तचाप र मिर्गौलाको समस्या थियो।
‘यो भाइरस जोकोहीमा सर्न सक्छ, तर दस प्रतिशत मात्र बिरामी पर्छन्,’ उनले भने, ‘शंका लाग्नासाथ जचाउनु भने पर्छ। सामान्य ज्वरो आएको भए पारासिटामोल र झोलिलो पदार्थ खाए ठीक हुन्छ।’